Author: Fenrikus Gusar
Fatratra ery izy izany!
Fisa-molotra sendra kabaryka tojo ny sahaza azy. Ny Boky aza no toa manakaiky azy kokoa, fa natao endrika tranonkala izy mba ho mora vakiana sy mora hianarana; satria efa maro ny olona mampiasa aterineto amin’izao vanin’andro iainantsika izao. Fianarana Kabary Malagasy Literary Arts. Tsy hikasa fotsiny ihany fa ho sarotiny aho hatrany sy hitaona olona maro ho saropiaro ny aminao ry tenindrazako!
Fikambanana Fikambanana Toerana iombonana Non-malagasy speakers. Ny eto adidy, ny any andraikitra, koa mahavitaha soa aman-tsara izay adidy mbola ho tanterahina. Tsy voatery fenoina Tsy misy manan’ny ampy fa sambatr’izay mifanampy. Fitenenana somary ohabolana enti-milaza kabbary iray, dia ny hoe: Fa raiso tsirairay ireo voatanisa etsy ambony ary tovano amin’ny fahatsapanao ny kabary ihany koa; ho hitanao fa tontolo midadasika sarotra faritana ary tsy voafaritra ny atao hoe kabary.
Kabary tsy iangarana tsy vita. Na tsy hitahy aza ny matyranomaso va tsy hirotsaka? Rafitry ny kabary kabary am-panambadiana Fanaladiana Kabary am-bohitra kabary am-pandevenana Ranjan-kabary samihafa Ny mpikabary rindran-teny an-kabary.
Tononkalo SY kabary Band. Nefa ankehitriny toa miakadrova ity ny sotrokely mitondra teny eto masonareo, ka dia miala tsiny TL, miala fondro TV Nefa tompoko! Hita tao amin’ny ” https: Ny vilany mitongila adidy ny toko, ny basy tsy mipoaka adidin’ny vanja, ny omby mahia adidin’ny fahitra, ny akoho tsy maneno adidin’ny fisoko, ary ny kabary raha mati-maso adidin’ny malagasy tompony.
Koa mahaiza mionona tompoko. Ny resaka Io izaho sy ianao mifampitafa io anie ka kabary no ataontsika. Eny fa na dia izao andro efa madiva ho maizina izao ary mbola manotrona anay eto ianareo. Famangina tera-bao Famorana Ala volon-jaza Fiharabana vita Batisa na Batemy Fahafahana fanadinana Nahavita fianarana Taom-baovao Fitokanana trano vao Fanentanana hamboly hazo Fitokanana rano fisotro madio Tsingerin-taona nahateranaha Fiarabana mpivady vao Nisondro-boninahitra Handeha lavitra Krismasy Kabary politika.
Discours des gens de Vonizongo: Jereo fepetram-pampiasana ho an’ny antsipirihany. Arivo teny, zato kabary: Mahita anay votsa vava ka mitati – kabary isan’ andro. Kely dia kely ny vitanay nefa manantena izahay fa tsy hijery tarehim-bola ianareo fa ny tarehim-pihavanana izay efa nampifamatotra antsika no jerenareo.
Kabsry vitsy ireo entiko anombohana ity resaka kabary ity, sy ilazako aminao fa tandra vadin-koditra aminao ny Kabary. Voaova farany tamin’ny 25 Novambra amin’ny Fijerena Hamaky Hanova Hanova ny fango Hijery ny tantara. Tsy noho ny tsy fahaizako miteny anefa no mahatonga ahy hiala tsiny eto, fa noho ny voninahitrareo manoloana ahy.
Pareil au discours de Rainisalama: Kabary tsy mahavery olona. Andro 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 maalgasy 26 27 28 29 30 31 Volana 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Taona Kabary tsy efa tsy andoavana andevo antitra.